Guccio Gucci inkampani has ngaleyo minyaka engaba ikhulu yentuthuko, elaqala ngempela banal - esitolo ukuthengisa travel izikhwama namapotimende. Ngokuhamba kwesikhathi, Guccio Gucci waqala ukwandisa umkhiqizo wawo uhla, yokuthengisa babe amawashi, imigexo igolide, izicathulo, izingubo, amakha. Ekuqaleni, umnikazi ibhizinisi lakhe izinto ezingamaphutha kakhulu kangaka, kodwa impumelelo esemqoka wafika inkampani ngo-1938. Guccio Gucci ngemva kokufa kwamadodana akhe uhlaziyo ibhizinisi, Bagijimela phambili futhi ngokushesha uphawu Gucci iba brand odumile emhlabeni. ENgilandi, USA, Japan wavula izitolo ukuthengisa izinto kusukela Gucci. Phakathi kwabo singathola umugqa omusha fashion isembatho, izesekeli, travel izesekeli amakha Gucci nabesifazane abangabafundi abakhuthele kufanele uwukubonakaliswa ukunambitheka kanye nesitayela kweqiniso.
Uma inkampani osethe umgomo - ukuthuthukisa amakha lomame, amadoda afana. Namuhla singasho ngokuphepha ukuthi wakwenza izikhathi eziningi. Namuhla, phakathi iqoqo elikhulu Gucci ngamakha, noma yimuphi owesifazane angathola nje ukhetho okungukuthi esifanele wakhe, futhi kuyinto enhle umphelelisi isithombe sakhe. Inkampani umele Iphunga elihle kakhulu emantombazaneni asemancane, futhi ephikelela sibambe amanzi encane Vamp lady ngisho amakha nge feramonami ezisiza amadoda anqobe ngokoqobo kusukela ngosuku lokuqala.
Omunye langa kakhulu ako Gucci Eau de Parfum kuyinto cocktail Oriental ngenhliziyo inothi Thyme nekhumini, okuyinto kancane kancane liphenduka izinkanuko musky umzila, ngomusa esigubuzele abakhethiwe yakhe. amakha Seductive elikhanyayo ngaso sonke isikhathi kuhlale uphawu obugagu nalutho zabesifazane kanye nesitayela, kuwo kukhona amanothi aqabulayo imbali orange futhi heliotrope, abuye acedzele konke lokhu ukwehluka ukuphrinta obucayi ngamakhambi kanye nezinongo asempumalanga.
Ayikho ezingadumile kakhulu namuhla ubhekwa Gucci Eau de Parfum №2. clockwork yakhe namanothi ukudlala yena singalinqoba cishe noma yimuphi owesifazane. Iphunga uvezwa ethambile cocktail ezimibalabala ne ezisawolintshi shades of tangerine futhi orange, futhi ixubene iphunga ecashile futhi usentekenteke samahlumela blackcurrant. Naphezu kweqiniso lokuthi iphunga nakanjani libhekisela kusihlwa okufana, kuba ngempela owumthombo isitayela nangobuciko.
Ayikho ngaphansi ezikhangayo kungenye ukunambitheka okukhulu kusukela brand odumile Flora ngu Gucci, eyakhishwa muva ngokwanele, kodwa kakade wakwazi ukunqoba izinhliziyo abalandeli abaningi amakha Gucci. Eau de toilette Flora uyazishintshashintsha ngakho, engasetshenziswa kahle njengenhlangano Iphunga kusihlwa ngoba owesifazane beqiniseka yena amaphesenti ayikhulu. entwasahlobo Ezinhle wawugcwele iphunga of peony blooms, amahlamvu, sandalwood namanothi ukukhanya orange kanye tangerine.
Gucci amakha kwabesifazane abhekwa amakha elite futhi kuyabiza, zingabantu ligxilile ngalabo abesifazane amahle ukuthi ngisho emhlabeni umusa yesimanje zabuna Ageless. umsebenzi odinga isineke ngempela futhi okunembile bamakha neze yize futhi kuzodala Iphunga elihle ladies fair, abangamalungu smart, enhle, futhi kunoma isiphi isimo, beqiniseka zabo namakhono. Perfume Gucci abesifazane - ngephunga imfihlakalo ukuthi shrouds owesifazane umgubuzelo thinnest unika inkolo eyayinaso wakhe futhi athandeke nakakhulu. Ukugcizelela main ekuthuthukiseni perfume senziwe amanothi ezimibalabala, kuya seductress omkhulu umxhwele futhi amadoda wabamba ongezansi, kubenze bathuthumele inhliziyo izinkanuko zenyama. Amazing Ukwakheka uyakwazi ukunqoba nhliziyo nowesifazane captivate wakhe i emangalisayo enhle ezweni amaphupho kanye lwasemaphusheni fantasies.
Gucci amakha kwabesifazane - lena isipho esikhulu eyintandokazi nowesifazane kuphela emhlabeni, futhi kahle, ukuthi amadoda akuqonde. Ilindele imimoya iholide ethengwayo ngezinga elimangalisayo, futhi konke ukuze anikeze ajabule ukuthi othandekayo wakhe. Ngempela iphunga ezinhle ngempela kungaba kwenze umoya wakho uthokoze? Yiqiniso it can! Futhi yini ngaphezulu, kungaba kakhulu ukushintsha ukuphila kwakho, ikakhulu uma ukholelwa ukuthi izimangaliso zikhona. Ngingathanda ukukholelwa ukuthi umuntu ongakholelwa ukuthi yilowo nalowo wesifazane, bese izwe bayoqhakaza imibala ehlukene kakhulu kwanda, ilula futhi enomusa!
Yokuhlanza kanjani ngempumelelo ultrasonic ebusweni? ukubuyekeza Customer